नेता, मन्त्री र सचिव नै कमिसन एजेन्टको पेटी ठेकेदार
मोहनराज पन्त - ‘तिम्रा नेतालाई भारत, अमेरिका, चिनका कर्मचारी राजदूतले फनफनी घुमाउँछन्’ भन्दा म प्रतिवाद गर्थेँ । त्रिशुली थ्री-एसहित प्राधिकरणमा भुक्तभोगी भएपछि भन्न थालेको छु- ‘हाम्रा नेता घुमाउन केको राजदूत चाहिनु, विदेशी ठेकेदारको कमिसन एजेन्ट नै काफी छन् ।
पीपलबोट डटकम : नीतिबिनाको मिति
नारायण वाग्ले - मंसिरसम्म पनि संविधानसभा निर्वाचन नहुने गरी अनिश्चयका काला बादल फेरि मडारिन थालेका छन्। चार नेताले आफ्नो आपसी विवाद मिलाइदिन मन्त्रिपरिषद्लाई आग्रह गर्ने तयारीले गड्यांगगुडुंग ल्याइसकेको छ। आन्दोलित अरु दलहरुलाई पन्छाउने मनशायले त पहिल्यैदेखि निर्वाचनको वातावरण गिजोलिसकेको छ।
भ्रष्टाचार मर्दैन भनेर रविन्द्रनाथको छोराबाट असुलउपर गर्ने फैसला तपाईँहरुकै हैन ?
सुरेन्द्र पाण्डे - विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्माणाधिन त्रिशुली ३–ए आयोजनाको क्षमता ६० बाट ९० मेगावाट पुर्‍याएको थाहा पाएदेखि नै मलाई औडाहा भइरहेको थियो । भ्रष्टाचार, अनियमितता, दुरुपयोग, ह्याङ्की प्याङ्कीको पनि हद हुन्छ नि । तीन वर्षमा सक्नुपर्ने काम २७ महिनासम्म एक चौथाइ पनि नगरेको ठेकेदारलाई पोस्ने त्यो निर्णय सहन गर्न सकिने खालको थिएन ।
श्रीमानहरूको चर्को ढर्रा
विनिता दाहाल - न्यायाधीश नियुक्तिको जिम्मा पाएको न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भर्तिको एकमेलो झारा टारेर पुनरावेदनमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको महिनौं बित्यो तर नियुक्ति अझै हुन सकेको छैन। न्यायाधीश भर्तिमा संविधानले तोकेका सर्तअनुसार मात्रै निर्णय गर्दा व्यक्तिको गोजीबाट न्यायाधीश झिकिन्छ भन्ने आमधारणालाई परिवर्तन गर्ने भन्दै परिषद्ले करिब तीन वर्षयता चर्को ढर्रा गरिरहेको छ।
कमलरीमाथि पाशविक बर्बरता
सम्पादकीय - दाङकी मुक्त कमलरी सिर्जना चौधरीको हत्यालाई लिएर उनीजस्तै नियति भोगेकाहरू मात्र हैन, न्याय र मानवीय मर्यादामा विश्वास गर्ने सबै चेतनशील व्यक्तिहरू मर्माहत छन् । न्यायका लागि या सिर्जना हत्यामा छानबिनको माग गर्दै सडकमा आउनेहरूमाथि राज्यसत्ताले गरेको दमन कुनै पनि बर्बर शासकहरूले दुनियाँमा देखाएका पाशविक बर्बरतासँग तुलना गर्न सकिन्छ ।
कुतकुती लगाउने फस्ट लभ- आइडियल बोई
शोभा शर्मा - काठमाडौं आइपुगेको एक–दुई महिना भइसकेको थियो । यतिका समय ऊसँग भेटेको त्यही पाँच मिनेट काफी थियो सम्झिन र मुस्कुराउन । बेचैनी बढ्न थाल्यो, ऊसँग एकै पटक बोल्न मात्र पाए पनि हुने । तर बोल्न त आँट चाहिन्थ्यो । पिसिओभित्र छिरेर फोन लगाउथेँ । हातै काँप्थे अनि त्यसै छोडेर हिँड्थेँ । कैयौं पटक आधा नम्बर डायल गरेर छोडेँ । कैयौं पटक नम्बर डायल गरेर काटेँ ।
क्रन्दन र धुवाँमा पुरिएको आर्यघाट
दीपक सापकोटा - जीवन र मृत्युको महिमा बोध गर्न म उभिएको छु, दनदनी बलिरहेको चिताअगाडि । यी जलिरहेका मान्छे साधारण जीव थिए । नाम– रामसिंह घर्ती । उनले पशुपतिको वृद्धाश्रममा बसेर घाट कुरेको दश वर्ष बितेछ । वृद्धाश्रममा बस्ने कुनै वृद्ध मरेपछि वृद्धाश्रमको पहिलो कर्तव्य हुन्छ, उनको सतगत गरिदिनु ।
यसरी तोडियो एनटिभीको एकाधिकार
टंक उप्रेती - निजीक्षेत्रका टेलिभिजनहरु प्रसारणमा आएपछि राजधानी र सहरी क्षेत्रका दर्शकहरुलाई नेपाल टेलिभिजनको विकल्प प्राप्त भयो । इमेज च्यानल र कान्तिपुर टेलिभिजन जन्मिदा २०५२ सालबाट सुरु माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
ठेकेदारको ध्याउन्न थियो पहिरो आइदेओस्, म्याद थप्न पाइयोस्
श्रीकमल द्विवेदी - स्कूलमा गएको पहिरोको निहुँ पारेर आयोजनाको म्याद थप्न ठेकेदारले जे–जस्तो विन्तीभाउ गरेपनि सुनुवाई गरेनौं । जे देखियो, प्रतिवेदन त्यही लेखियो । प्राधिकरणलाई निमोठेर ठेकेदार पोस्ने कुरा पनि त भएन ।
पत्रकारिताको धर्म नै आलोचना
युवराज घिमिरे - पत्रकारिता मेरा लागि जागिर मात्र हैन, केही मूल्य, मान्यता र धर्म पनि हो । यसमा प्रतिबद्धता जनाउँदा जीवन र व्यवसायमा अस्थीरता आउने र आफ्नो अस्तित्व कसरी बचाउने, अर्को चुनौती बन्न सक्छ । त्यस्तो अस्थीरतामा आफ्नै अभिव्यक्तिका लागि मञ्च खोज्नुपर्ने चुनौती थपिन्छ ।
मधेसी राजनीतिमा उच्च जातको कब्जा
युवराज घिमिरे - मधेसभित्रका विविधता र विभेदलाई संशोधन गर्ने कार्यनीति बाहिर नल्याएसम्म या त्यसमा प्रतिबद्धता नजनाएसम्म उच्च जातिको महत्वकांक्षाको भ¥याङमात्र बन्ने छ संघीयता र ‘पहिचान’को वर्तमान नारा । ७२ भन्दा कम्ती स्थानमा चुनाव लड्ने पार्टीले अरु जातिहरुलाई ‘समावेशी’ नीति अन्तर्गत कोटा निर्धारण गर्नु नपर्ने अडानमा मधेसका प्रभावशाली नेताहरू लागिपरेका छन् ।
रातभरि जुम्ला जलिरह्यो
राधा पौडेल - सलह बगेजस्तो देखिन्थ्यो, माओवादी फौज । एक लहर हुर्र अघि बढ्थ्यो, अर्को लहर पछ्याउँदै आउँथ्यो । त्यसको पछाडि फेरि अर्को लहर । गोली चल्दा बन्दुकबाट छुट्ने आगोका झिल्काले मेरा आँखा तिरमिर भए।
बुद्ध जयन्ती विशेषः माला टाँगेर शान्ति आउँदैन
देवेन्द्रप्रसाद सिटौला - बुद्धका ठूल्ठूला तस्बिरमा माला टाँगेर धुपबाती गरेरमात्र शान्ति प्राप्त हुँदैन । बुद्धका वाणी नबुझ्ने र व्यवहारमा नउतार्ने हो भने बुद्ध जयन्ती मनाएरमात्र काम छैन । बुद्धवाणीलाई सम्झँदा संगायनको महत्व पनि बुझ्नुपर्छ ।
मानवीय क्षतिपूर्तिको मूल्य कति हुन्छ ?
गोविन्द मैनाली - यत्रो घटनाको अभियोग लगाएर लज्जास्पद ढङ्गले पराजय बेहोर्दा पनि जापान सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा माफी नमागेकामा र आफ्नो गल्ती स्वीकार नगरेकामा मेरो क्षोभ यथावत् छ।
सामाजिक परिबन्धले माओवादी बनायो
नवीन जिरेल - गन्तव्य पत्तो लगाउन नसकेर भौँतारिरहेको मलाई आफ्नो जीवनको सहारा माओवादी पार्टीबाहेक अरू हुनै सक्दैन भन्ने लाग्दै गयो । मेरो किशोर मस्तिष्कमा जुन उथलपुथल मच्चिन थालेको थियो, त्यसले मलाई एउटा न एउटा गन्तव्य रोज्न बाध्य पारिरहेको थियो।
मधेसमा गठबन्धनका लागि भारतको जोडबल
अमित ढकाल - मधेसमा चुनावी गठबन्धनको प्रखर विरोधी नेता हुन् राजेन्द्र महतो। उनले गठबन्धन निर्माण अस्वीकार मात्र गरेका छैनन्, मधेसी नेताहरूलाई सार्वजनिक रूपमा मधेसविरोधीको आरोप पनि लगाएका छन्। उनी स्वयं सदस्य रहेको मधेसीमोर्चाका दुई प्रमुख नेताहरू महन्त ठाकुर र विजय गच्छदारलाई उनले विरोधको तारो बनाएका छन्।
पीपलबोट डटकम- चुनाव संविधानसभा कि संसदको?
नारायण वाग्ले - अहिले चाहिने बहस संविधानसभाकै लागि निर्वाचन आवश्यक छ कि छैन भन्ने हो । कांग्रेस र एमालेका नेताले आँतमा एउटा कुरा र दाँतमा अर्को रंग देखाइरहेका छन् । संविधानसभाकै लागि निर्वाचन किन आवश्यक छ भन्नेमा उनीहरुका जवाफ चित्तबुझ्दा छैनन् । संविधानसभा भनेको ह्वीप नलाग्ने, दलीय नियन्त्रण र अनुशासन नहुने थलो हो भने त्यसका लागि थ्रेसहोल्ड किन चाहिन्छ भन्ने जवाफ उनीहरुसँग छैन ।
कांग्रेसले बुझेन मधेसको प्रेम
मिनेन्द्र रिजाल - काङ्ग्रेसले एकपटक सन्देश पाइसकेको छ मधेसको मुद्दामा, मधेसको प्रेम बराबर, मधेसको स्नेह बराबर काङ्ग्रेसले काम गर्न सकेन । काङ्ग्रेसले अब त्यो मुद्दामा कसरी प्रस्तुत हुन्छ, अब हुने चुनाव त्यसको परीक्षण हो । त्यो गर्न सकिएन भने दुइटा लगातारको चुनावमा हाम्रो उपस्थिति अघिल्ला चारवटा निर्वाचनमा भन्दा कम भयो भने हामीले मधेसको बलियो उपस्थिति भएको दलको रुपमा आफूलाई टिकाइराख्न सक्दैनौँ ।
पुस्तकको तीर्थ खरानी भएपछि
शेखर खरेल - खरानी बनेका पुस्तका रासमाथि टेक्दै म भित्र छिरे। त्यहाँ जे देखियो, त्यो हेर्न सकिने खालको थिएन। स्वर्गजस्तो पिल्ग्रिम्स अफगानिस्तानमा देखिने जस्तो खण्डहर बनेको थियो। दलिन खर्लप्पै झरेको थियो। दलाई लामाले प्रार्थना गरिरहेका पुस्तक ‘जर्नी फर पिस’, प्याट्रिक फेन्चले चुरोट सल्काइरहेको आवरणसहितको पुस्तक ‘दी वर्ल्ड इज ह्वाट इट इज’ निकै प्रतिकात्मक देखिन्थे।
स‌‍ंविधान मान्दैन सर्वोच्च ?
विनिता दाहाल - जब विभिन्न बहानाबाजीमा सूचनामा बन्देज लगाउन खोजिन्छ तब कुनै पनि निकायको पारदर्शीतामा प्रश्न उठाउने प्रसस्त ठाउँहरू भेटिन्छन् । संविधानमा मौलिक हकले सञ्चारमाध्यम भनेर छापा, रेडियो, टेलिभिजन र पछिल्लो समय अनलाइनलाई समेत स्वीकार गरिसकेको छ । यस्तो बेला सर्वोच्च अदालतले भने छापाबाहेकका सञ्चारमाध्यमको भूमिका अस्वीकार गर्नु जायज हो ?
साझा बसले बेलैमा सोचोस्
जनकराज भट्ट - जुन हिसाबले कर्मचारी निरास बन्दै गएका छन्, राम्रो संकेत होइन । सिफ्टअनुसार काम लगाउने, बढी काम लगाउन परे ओभरटाइमको पैसा दिने, पिकआवरमा अलिक मिलाउने गरी प्रोफेसनल हुने, नियममा चल्न यात्रुहरुलाई बानी पार्ने लगायतका काम नगर्ने हो भने साझा बस फेरि बन्द हुन बेर छैन ।
पीपलबोट डटकमः दुइटा सभाको निर्वाचन
नारायण वाग्ले - पहिला चार वर्षको संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्नुको कारण समय नपुगेर हो भन्ने निस्कर्ष दिन खोजिँदैछ। त्यसकारण एक वर्ष थपेर पाँचवर्षे अवधि दिऊँ भन्ने मनसाय प्रकट भइरहेको छ। अर्थात् नेपालले आगामी पाँच वर्ष संविधान बनाउने अभ्यासमा मुलुकलाई प्रवेश गराउने भयो।
विप्लवले जान देलान् नेकपा-माओवादीलाई चुनावमा?
अमित ढकाल - वैद्यले क्रान्तिका लागि आवश्यक परे आफ्नो ज्यान आहुति दिन तयार रहेको सार्वजनिक भाषण त गरे, तर दमको रोगले थलिँदै गएका ६७ वर्षीय वैद्यको शरीरमा क्रान्तिको जोखिम उठाउन सक्ने साहस र उत्साह छ भन्ने शंका छ कार्यकर्तालाई
सर्वोच्चमा बालुवाटारको शासन
विनिता दाहाल - चार दशक न्याय सेवामा उत्कृष्ट काम देखाउन नसके पनि विवादमा कहिल्यै नतानिएका मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी दिनदिनै थप विवादास्पद बन्दै गएका छन् । उनले भविष्यले बिर्सनै नसक्ने गरी न्यायपालिकामा आफ्नो खिल गाडेका छन् जसले कैयौं दशक न्यायपालिकाको साख दुखाइरहने छ । रेग्मी राजीनामा नदिई कार्यपालिका छिरेको अदालतकै थुप्रै न्यायाधीशलाई चित्त बुझेको छैन ।
एउटा पुरानो हिरोको कथा
टंक कार्की - उनी मुक्तिको कामना गर्ने तर वर्गीयरुपमा असंगठित किसान, उनीहरुका ‘प्रतिनिधि’ र त्यस आधारमा बनेको निरंकुश शाही सत्ता देखेर दिक्दार थिए । यी सम्भ्रान्त सुब्बा भिरपाखा जान्थे, दाउराघाँस काट्थे, मरिकुच्च भारी बोक्थे, दुध दुहुन्थे, खाना पकाउँथे, हलोकोदालो गर्थे ।
खेर गएका ७ सय २७ दिन
राजेन्द्र फुयाल - दुई वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाले चारपटकसम्म आफ्नो कार्यकाल आफैंले विस्तार गरी दोब्बर बनायो । ८७ कार्यदिनमा बसेका १ सय २२ बैठकमध्ये धेरैजसो औपचारिकतामा सीमित थिए । संविधानसभा सचिवालयको रेकर्ड अनुसार चार वर्षमा उसले जम्मा ३ सय ८१ घन्टा २८ मिनेटमात्र खास काम गरेको थियो ।
मदर्स डेमा छोरीको कार्ड
मनोज दाहाल - स्कुलहरूले गणित सिकाउँछन्, अंग्रेजी सिकाउँछन्, विज्ञान सिकाउँछन् तर संस्कार सिकाउँदैनन् । गुडमर्निङ, हेलो, ममीपापा भन्न सिकाउँछन् तर ठूलालाई सम्मान, सानालाई माया गर्न सिकाउँदैनन् । खुसीको कुरा, हिजोआज केही स्कुलहरूले थोरै सही संस्कार पनि सिकाउन थालेका छन् । ‘मदर्स डे’मा कार्ड बनाएर आमालाई दिनुपर्छ भन्ने पाठ पढाउन थालेका छन् ।
रातभरिमै त्यस्तो के भयो?
किरण भण्डारी - अघिल्लो रात मात्रै सरकारलाई ‘लोकमानको नाम पुनर्विचार गर्नू’ भनेका राष्ट्रपति यादव भोलिपल्ट बिहानै सपथ खुवाउन राजी हुनुले कतै उनी पनि भारतसामु लम्पसार परेका त होइनन् भन्ने शंका जन्माएको छ । होइन भने, रातभरिमै त्यस्तो के भयो, जसले निर्णय फेर्न राष्ट्रपति, कांग्रेस र एमाले बाध्य भए ? वा, अघिल्लो रातको बालुवाटार बैठक आफैंमा एउटा नाटक थियो ?
राष्ट्रपति निरीह बनेको दिन
नारायण वाग्ले - राष्ट्रपतिले चाहेको भए कार्कीको नियुक्ति रोक्न सक्ने थिए । रेग्मीकै नियुक्ति रोक्न सक्थे उनले । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँगको चिसो सम्बन्ध र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाका नाममा भारतीय समर्थन हासिल गर्न नसकेपछि उनले निर्वाचनका लागि निर्दलीय योजना अनुमोदन गरे । संविधान संरक्षकका रूपमा आफ्नो दायित्व ख्याल गर्छु भन्दाभन्दै संशोधनै गर्नु नपर्ने संविधानमा कथित बाधा देखाएर फुकाऊ आदेश जारी गरिदिए ।
दोषी लोकमान कि बाह्य सञ्चालित चारदल नेतृत्व र रेग्मी ?
युवराज घिमिरे - नेपाली राजनीति (सञ्चार र नागरिक समाज अपवाद छैनन्) को यही द्धैध चरित्रका कारण मुलुक (राज्य) को अधिकारिकता र उसको नैतिक हैसियत गुमेको छ। यही दोहोरो चरित्र र नेताहरूको बिकाउ प्रवृत्तिले विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याएको छ। त्यसका लागि चार दल दोषी छन्।